Global Voices Podcast: Taom-baovao 2012 Feno Fahavitrihana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Janoary 2012 7:16 GMT
Vakio amin'ny teny Español, srpski, Français, Aymara, 日本語, English
Tsy raharaha mora ny manao jery todika taona iray an'ny Global Voices Online! Ny lefitry ny mpamoaka lahatsoratsika, Emma Brewin, miresaka momba ny fandinganana mankany amin'ny fitosaka maherinà vaovao eran-tany, izay ho azy dia miavaka ao anatin'ireo tantara nandritry ny taona iray tena feno.
Ireo ekipam-paritry ny Global Voices dia ahitana mpanoratra, mpitoraka bilaogy ary mpamokatra media maro karazana samy hafa. Ny sasany, toa an'i Thiana Bondo, mpanoratra sy mpandika teny ao amin'ny Global Voices avy any Bahia, Brezila dia avy ao amin'ny sehatry ny fanaovan-gazety. Ny mpiandraikitra ny famoahan-dahatsoratsika, Solana Larsen dia niresaka niaraka tamin'i Thiana, izay mipetraka any Londona amin'izao fotoana izao, momba ny fahasamihafana eo amin'ny maha-mpanao gazety isanandro azy any Brezila, sy ny fanoratana ho an'ny Global Voices.
Tamin'ny Desambra, nampiantrano hetsika naharitra telo andro tany Cochabamba, Bolivia ny Rising Voices ho an'ireo mpitoraka bilaogy any Bolivia. Ny tanjona tamin'izany dia ny hanohanana ny fivoaran'ny tontolon'ny bilaogy matanjaka, sy maro sampana. Nisy ireo atrikasa sy famelabelarana ireo fitoavana teknika sy ny fikarakarana paikady. Tamin'ny teny Espaniola io fivoriana io, ary nantsoina hoe Conectándonos (Mifandray).
Maria Mercado dia mpianatra sy mpirotsaka an-tsitra-po izay miasa miaraka amin'ireo fianakaviambenà zanatany. Nanatrika ilay fivoriana izy ary nilaza taminay ny zavatra nianarany. Raha te haheno bebe kokoa ianao, misy podcast iray mahafinaritra momba ilay hetsika iray manontolo ao amin'ny Rising Voices avy amin'ny Tale mpiandraikitra antsika Georgia Poppellwell, sy ny Talen'ny Rising Voices Eduardo Avila.
Mety hieritreritra ianao fa voasaraky ny elanelan-tany isika ary mifandray amin'ny aterineto fotsiny ihany, nefa toa manana fahazàrana vitsivitsy iraisana ihany koa isika. Vonona lalandava miaraka amin'ny fitaovana fitahirizany, niresadresaka ireo zava-mahagagan'ny fandehandehanana amin'ny bisikleta miaraka amin'ny Tale mpanatanteraky ny Global Voices, Ivan Sigal i Solana Larsen. Araka ny hazavain'Ivan, ny fianakaviamben'ireo mpivoy dia isan'ny iray mihetsiketsika tokoa.
Cyrus Farivar, mpanao gazety Amerikana mipetraka any Alemana, ary nanoratra ilay “The Internet of Elsewhere” dia nitafa taminay momba ny fivoizana bisikilety – mivantana avy eny ambony sezan'ny bisikilety. Any Danemarka, Maria Grabowski Kjaer dia nizara ny feon'ny tanàna izay nankalazana ny fivoizana bisikilety. Ho an'i Maria dia tsy fomba fitaterana fotsiny ihany ny fivoizana bisikilety fa fomba fiaina ihany koa.
Maheno mozika Creative Commons mahatehotia maro ianao ao anatin'ity podcast ity. Isaorana i Mark Cotton tamin'ireo famokarana mahatalanjona ireo ary ihany koa ho an'ireo feo mahagaga rehetra tamin'ireo hetsika sy horonantsary izay nanampy tamin'ny fanambàrana ity podcast ity.